Ọrụ ỤmụakaVisa & Caq
Ọrụ ụmụ akwụkwọVisa & Caq
Ọchịchị Canada chọrọ ka ndị ọbịa si n'ọtụtụ mba nweta Visa Nwa Oge Visa maka njem agụmakwụkwọ na oge ruru ọnwa isii, na Akwụkwọ Enyemaka maka ụmụ akwụkwọ chọrọ ịmụ akwụkwọ na Canada karịa ọnwa 6. Na mgbakwunye, gọọmentị Quebec chọrọ ụmụ akwụkwọ niile si mba ọzọ inweta a Asambodo Asambodo du Québec (CAQ) maka ụmụ akwụkwọ niile chọrọ ịmụ na Quebec ihe karịrị ọnwa 6.
Ụdị visa ị chọrọ ga-adabere ná mba ị si na ogologo oge nke usoro ihe omume gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbịa Canada ma na-amụ ihe ruo ọnwa 6, ịnwere ike ịnweta visa esenowo ma ọ bụ eTA (Nlekọta njem njem) dabere na mba ị si.
Chọpụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ visa
Ọ bụrụ na edepụtara mba gị n'ebe ahụ. BLI ga-enyere gị aka site na usoro a ma zite gị akwụkwọ akwụkwọ dị mkpa iji nyefee ya na ngwa gị.
Ọmụmụ ihe & Ụlọ ahịa
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmụ akwụkwọ na BLI karịa ọnwa isii, enwere akwụkwọ abụọ ị ga-enwerịrị: Akwụkwọ Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ Canada na CAQ (Ntinye Akwụkwọ Quebec). Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, ị ga-ebu ụzọ tinye akwụkwọ maka CAQ. Mgbe ị nwetasịrị CAQ gị (izu 3-6 n'ozuzu), ị nwere ike ịmalite usoro iji nweta ikikere Ọmụmụ Ihe Canada gị.
Kedu ka esi etinye maka ikikere nke ọmụmụ Canada?
Kedu ka esi etinye maka caị gị?
Ma ndị ọchịchị obodo Quebec na ndị Canada na-enye ụmụ akwụkwọ mba nile ikike ịmụ ihe nanị mgbe a nabatara ha n'usoro ihe omume a ma ama. Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
BLI nwere ike inyere gị aka na ngwa ngwa gị ma ị rịọ ya.